ဆီးမထှကျ တာတှေ ဓမ်မတာ လှနျတာတှေ အတှကျ ၁၅ မိနဈလောကျ အတှငျး ကောငျးတဲ့ဆေးနညျး လာပါပွီ – Askstyle
ဆီးမထှကျ တာတှေ ဓမ်မတာ လှနျတာတှေ အတှကျ ၁၅ မိနဈလောကျ အတှငျး ကောငျးတဲ့ဆေးနညျး လာပါပွီ
“ အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ” ကျန်းမာခြင်း သည် လာဘ်ကြီး တစ်ပါး..တဲ့ အာရောဂျံ = ကျန်းမာခြင်းသည် ၊ ပရမံ = မြတ်သော ၊ လာဘံ = လာဘ် မည်၏ …လို့ မြန်မာ့ ဆိုရိုး စကား ရှိပါတယ်…ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း ဟာ ဘဝမှာ အကြီးမား ဆုံးသော ဆုလာဘ် တစ်ခုပါပဲ… ကျန်းမာ မှ စားချင်တာ စားနိုင် ၊ သွားချင်တာ သွားနိုင် ၊ လုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင် မယ်လေ ….
အဲဒီ့ အတွက် “ ယောက်ကျားမှာ ဆီး-မိန်းမမှာမီး”လို့ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုရိုး စကားလေးတစ်ခု ရှိလာ ပြန်ပါတယ်… ယောက်ကျားလေး တွေဟာ ဆီးကောင်းမယ်.. မိန်းကလေး တွေကတော့ သွေး ကောင်းမယ် ဆို ဘာ ရောဂါမှ အလွယ်တကူ မဖြစ်နိုင် တော့ပါဘူး…ဒါကြောင့် ဆီးနဲ့ မီးကောင်းဖို့ အတွက် အထူး ဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်…
အောက် ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာ လေးကတော့ ဆီးမထွက်ခြင်း နဲ့ ဓမ္မတာ လွန်ခြင်း တို့ကို ၁၅ မိနစ်တည်းနဲ့ ပျောက်ကင်း သွားစေတဲ့ အဖိုးတန် ဆေးနည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်… အင်္ဂလိပ် ဆေးတွေ သောက်ရမှာ ကြောက်သူတွေ အတွက် သောက်စရာ မလိုဘဲ အလွယ်တကူ သုံးနိုင်မယ့် မြန်မာဆေးနည်း လေးပါပဲ… လယ်ကန်စွန်း လို့ တစ်ချို့က ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကန်စွန်းရိုးနီ ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ ဆီးအိမ်မှ ဆီးမထွက်ခြင်း နဲ့ ဓမ္မတာ လွန်ခြင်း ရောဂါတွေကို ၁၅ မိနစ် အတွင်း ထိထိ ရောက်ရောက် ကုသ ပေးနိုင် ပါတယ် ။
၁ ။ ကန်စွန်းရိုးနီ၏ အရွက် (လယ်ကန်စွန်း လို့လည်း ခေါ်ကြ ပါတယ် )
၂ ။ မန်ကျည်းရွက်
၃ ။ ဘူးရွက်
၄ ။ အားလုံးကို ဆတူရော ကြိတ်လိုက်ပါ ။
၅ ။ ကြိတ်ပြီးသည် များကို ဆန်မှုန့် ညက်ညက်နှင့် ဖျော်၍ ဆီးခုံ ပေါ်သို့ တင်လိုက် ပါ ။
၆ ။ ဆီးအိမ် တွင်းမှ ဆီး မထွက်သူများ ၁၅ မိနစ် အတွင်း ဆီး ကျဆင်း လာပါ လိမ့်မယ် ။ ဓမ္မတာလွန် နေသူ များလည်း ရပ်တန့်ကာ ရောဂါ သက်သာ ပျောက်ကင်း စေနိုင် ပါတယ် ။
အားလုံးပဲ ရောဂါဘယာ ကင်းဝေးပြီး သက်ရှည် အနာမဲ့ ကြပါစေ …
Writer – HW
“ အာရောဂြံ ပရမံ လာဘံ ” ကနျြးမာခွငျး သညျ လာဘျကွီး တဈပါး..တဲ့ အာရောဂြံ = ကနျြးမာခွငျးသညျ ၊ ပရမံ = မွတျသော ၊ လာဘံ = လာဘျ မညျ၏ …လို့ မွနျမာ့ ဆိုရိုး စကား ရှိပါတယျ…ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျခွငျး ဟာ ဘဝမှာ အကွီးမား ဆုံးသော ဆုလာဘျ တဈခုပါပဲ… ကနျြးမာ မှ စားခငျြတာ စားနိုငျ ၊ သှားခငျြတာ သှားနိုငျ ၊ လုပျခငျြတာ လုပျနိုငျ မယျလေ ….
အဲဒီ့ အတှကျ “ ယောကျကြားမှာ ဆီး-မိနျးမမှာမီး”လို့ ကနျြးမာရေး အတှကျ ဆိုရိုး စကားလေးတဈခု ရှိလာ ပွနျပါတယျ… ယောကျကြားလေး တှဟော ဆီးကောငျးမယျ.. မိနျးကလေး တှကေတော့ သှေး ကောငျးမယျ ဆို ဘာ ရောဂါမှ အလှယျတကူ မဖွဈနိုငျ တော့ပါဘူး…ဒါကွောငျ့ ဆီးနဲ့ မီးကောငျးဖို့ အတှကျ အထူး ဂရုပွုဖို့ လိုအပျပါတယျ…
အောကျ ဖျောပွပါ အကွောငျးအရာ လေးကတော့ ဆီးမထှကျခွငျး နဲ့ ဓမ်မတာ လှနျခွငျး တို့ကို ၁၅ မိနဈတညျးနဲ့ ပြောကျကငျး သှားစတေဲ့ အဖိုးတနျ ဆေးနညျးလေး ဖွဈပါတယျ… အင်ျဂလိပျ ဆေးတှေ သောကျရမှာ ကွောကျသူတှေ အတှကျ သောကျစရာ မလိုဘဲ အလှယျတကူ သုံးနိုငျမယျ့ မွနျမာဆေးနညျး လေးပါပဲ… လယျကနျစှနျး လို့ တဈခြို့က ချေါဝျေါကွတဲ့ ကနျစှနျးရိုးနီ ရဲ့ အစှမျးနဲ့ ဆီးအိမျမှ ဆီးမထှကျခွငျး နဲ့ ဓမ်မတာ လှနျခွငျး ရောဂါတှကေို ၁၅ မိနဈ အတှငျး ထိထိ ရောကျရောကျ ကုသ ပေးနိုငျ ပါတယျ ။
၁ ။ ကနျစှနျးရိုးနီ၏ အရှကျ (လယျကနျစှနျး လို့လညျး ချေါကွ ပါတယျ )
၂ ။ မနျကညျြးရှကျ
၃ ။ ဘူးရှကျ
၄ ။ အားလုံးကို ဆတူရော ကွိတျလိုကျပါ ။
၅ ။ ကွိတျပွီးသညျ မြားကို ဆနျမှုနျ့ ညကျညကျနှငျ့ ဖြျော၍ ဆီးခုံ ပျေါသို့ တငျလိုကျ ပါ ။
၆ ။ ဆီးအိမျ တှငျးမှ ဆီး မထှကျသူမြား ၁၅ မိနဈ အတှငျး ဆီး ကဆြငျး လာပါ လိမျ့မယျ ။ ဓမ်မတာလှနျ နသေူ မြားလညျး ရပျတနျ့ကာ ရောဂါ သကျသာ ပြောကျကငျး စနေိုငျ ပါတယျ ။
အားလုံးပဲ ရောဂါဘယာ ကငျးဝေးပွီး သကျရှညျ အနာမဲ့ ကွပါစေ …